आमिरको नयाँ फिल्म कहिले आउँला ? | NepalDut
आमिरको नयाँ फिल्म कहिले आउँला ?
आमिर खानको फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’का निर्माताले यो फिल्मको रिलिज मिति घोषणा गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार यो फिल्म अर्को वर्ष क्रिसमसमा रिलिज गरिनेछ । यो फिल्मलाई अद्वैत चन्दनले निर्देशन गरेका हुन् । यसअघि चन्दनले आमिरको फिल्म सिक्रेट सुपरस्टार पनि निर्देशन गरेका थिए ।
यो फिल्ममा आफूले काम गर्न लागेको आमिरले आफ्नो ५४ औं जन्मदिनको अवसर पारेर गत मार्चमा गरेका थिए । फिल्ममा आमिर ‘स्लिम अवतार’मा देखिने र यसका लागि उनले २० किलो तौल घटाएको भारतीय मिडियाको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।